श’रीरको तौ’ल घटाउन चा’हनुहुन्छ ? यी उ’पाय अपनाउनुहोस् यी उपा’य - Nawalpur Dainik
श’रीरको तौ’ल घटाउन चा’हनुहुन्छ ? यी उ’पाय अपनाउनुहोस् यी उपा’य
प्रायः अ’दुवालाई मसालाको रुपमामात्रै प्र’योग गर्ने चल’न छ। तर, यसलाई टुक्रा पारी पानीमा मिसाएर नियमित सेवन गरेमा यसले धेरै खाले रो’गहरुबाट बचाँउछ । अदुवामा पाइने एन्टी ब्या’क्टेरियल, एन्टी फँ’गल र एन्टि इ’न्फ्लेमेटरी जस्ता गुणले हाम्रो शरिर स्व’स्थ राख्न मद्धत गर्छ। एक कप पानीमा एउटा सानो टुक्रा अदुवा मिसाएर उमालेर पिउने गर्नाले धेरै फाइदा गर्छ । यस्ता छन् अ’दुवापानी नियमित सेवन गर्नुका फाइदाः
१) क्या’न्सर बाट बचाँउछः अ’दुवामा एन्टी क्या’न्सर तत्व पाइन्छ। त्यसैले अदुवा पानी नियमित पिउनाले फो’क्सो, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लगाएतका धेरै थरी क्या’न्सरहरुबाट बचाँउछ । २) मु’टु पोल्न कम गर्छः खाना खाएको २० मिनेटपछि एक कप अदुवापानी पिउनुहोस् । यसले शरिरमा एसिडको मात्रा कन्ट्रोल गर्छ र मु’टु पोल्ने स’मस्या कम हुन्छ।
३) पा’चनप्रणाली सुधार्छः अदुवा पानीले श’रिरमा पा’चन गराउने जुसको मात्रा बढाँउछ। यसले खाना छिटो पचाउन सहयोग गर्छ। ४) तौल घटाउँछः अदुवा पानी पिउनाले शरिरमा मेटाबोलिजम सुधार हुन्छ । यस्तोमा बोसो छिटो पग्लन्छ र तौ’ल घटाउन सजिलो हुन्छ। ५) डायबिटिज नियन्त्रण गर्छः नियमित अदुवापानी पिउनाले श’रिरको र’गतमा सुगर लेभल नियन्त्रण हुन्छ। यसले डायबिटिज नियन्त्रण गर्छ।
६) मांशपेशीको दुखाई कम गर्छः अदुवा पानी पिउनाले शरिरमा र’क्त सञ्चारमा सुधार आँउछ। यसले माशंपेशीमा आराम मिल्छ र माशंपेशीको दुखाई कम हुन्छ। ७) टाउको दुख्न कम गर्छः अदुवा पानी नियमित पिउनाले म’स्तिष्कको कोषहरुमा आराम मिल्छ र टाउको दुख्न कम हुन्छ । ८) छाला स्वस्थ बनाउँछः नियमित अदुवापानी पिउनाले शरिरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । यसले रगत सफा हुन्छ र रगत र छालाको इन्फेक्सनको खतरा कम हुन्छ।
९) प्रतिरक्षा बढ्छः अदुवा पानी पिउनाले शरिरको रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ्छ। यसले रुघाखोकीको खतरा टर्छ। १०) कफको समस्या हटाँउछः अदुवापानीमा एन्टी ब्याक्टेरियल तत्व हुन्छ। यसको पानी पिउनाले खोकीको समस्या हट्छ।
खाली पे’टमा मह मिसाए’र दै’निक एक पो’टी ल’सुन खानुहो’स्, हुनेछन् यी १० फाइ’दा: मह एन्टी बा’योटिक र एन्टी ब्या’क्टेरियल हुन्छ भने लसुनमा एलिसिन र फाइबरजस्ता फाइदाजनक न्यूट्रियन्ट्स हुने गर्दछ । यी दुबै मिसाएर खाँदा तपाईंको तौल घटाउनुका साथै विभिन्न रो’गबाट छुटकारा दिनेछ । यी दुबै मिसाएर खानुका १० फाइदाः
तौ’ल घट्नुः शरिर र लसुनको मिश्रणले शरि’रको बोसोलाई कम गर्दछ । यसले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ । मु’टुको समस्याः यसले को’लेस्ट्रोल कम हुन्छ र रक्त संचारलाई सन्तुलनमा राख्दछ । बलियो दाँतः यसमा पाइने फस्फरसले दाँत बलियो बनाउँछ । यसले गमको समस्याबाट पनि जोगाउँछ । क्या’न्सरः लसुन र महमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले क्या’न्सर हुनबाट जोगाउन सहयोग गर्दछ ।
संक्रमणः यसमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । त्यसकारण फंगल इन्फेक्सन हटाउन यो फाइदाजनक हुन्छ । रु’घा खोकीः यो खाँदा शरिरमा गर्मी बढ्छ । त्यसकारण चिसो महिनामा रु’घा खोकीबाट टाढा राख्छ । प्र’तिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्दछः लसुन र महले रो’ग प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउँछ । यसले शरिरको संक्रमणबाट बचाउँछ ।
थाहा पाउनुस् लसुन खानुका अन्य फाइदाः मधुमेहः यसले र’गतमा सुगरको स्तरलाई नियन्त्रणमा राख्दछ । यसकारण यो म’धुमेहका लागि फाइदाजनक हुन्छ । रक्तचापः यसमा एलिसिन हुन्छ जसले र’क्तचापलाई साधारण राख्दछ । यसले शरिरमा बोसोलाई कम गर्नमा फाइदाजनक हुन्छ । बाँझोपनः यसमा सेलेनियम हुन्छ जसले बाँझोपनलाई हटाउन सहयोग गर्दछ ।
रा’तीको खाना ढी’लाे खानुको अ’सर यस्तो छ ! राति ढीला सुत्ने र विहानपनि ढीला उठ्ने बानी आ’धुनिक जीवनको पर्याय जस्तै बनेको छ । य’सरी राति ढीला सुत्दा मा’निसहरुमा खाना खाने बानी पनि ढीलो हुन थालेको छ । यसले मानिसको स्वा’स्थ्यमा नराम्रो अ’सर पर्न सक्छ । ढीला खाना खादाको असर यस्तो छ, सुत्नमा समस्या हुन्छ, अबेर रातीमा खाना खानुले शरीरको स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुन्छ । सन २०१५ मात्र गरिएको एक अध्ययन अनुसार, अबेर राति खाना खानुनले निद्रामा त समस्या हुन्छ नै साथमा ग्यास्ट्रिकले पनि सताउँछ । पाचन प्रक्रियामा समस्या, तपाईंलाई यदी ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने खाना खाने समयमा परिवर्तन गर्नुहोस् । अबेर राति खाएको खाना तपाईंको शरिरमा राम्ररी डाइजेस्ट हुन सक्दैन् । जसका कारण ग्यास्ट्रिकको समस्या बढ्छ । तौल बढ्नु, अबेर राति खाना खानुले शरीरको स्केडियन क्लक पनि प्रभावित हुन्छ । स्केडियन क्लक बिग्रनुले निन्द्रामा समस्या आउनुका साथै हार्मोन्सको संतुलन पनि खराव भएर जान्छ । यसले शरीरको तौल बढ्न थाल्छ ।
ब्लड प्रेसर बढ्छ, गलत समयमा खाएको खानाले शरीरलाई फाइदा भन्दा धेरै अ’सर पुर्‍याउँछ । ढीला खाना खाँदा हृदयघात र मधुमेहको खतरा बढी हुन्छ । अध्ययनअनुसार, अबेर राति खाना खाँदा ब्लड प्रेसरको समस्या तथा ब्लडमा सुगरको लेवल समेत बढ्छ । जुन मानिसको स्वास्थ्यका लागि खतरनाक सावित हुन सक्छ । थप जानकारी
सुगर भएको मान्छेलाई छुट्टै खाना जरूरी पर्दैन, सुगर, डाइभिटिज, म’धुमेह र चि’नीरो’ग सबैलाई एउटै नामले चिनिन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा शरीरमा चिनीको मात्रा धेरै देखिनु हो । तर, चिनीको मात्रा बढी देखिनु भनेको शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भएको होइनकि हाम्रो शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कमी भएको हो । जे जति हामीले खान्छौ पिउँछौ (चाहे त्यो आलु होस्, भात होस्, ढिँडो, चाउचाउ, च्याख्ला, बिस्कुट जे सुकै होस्) सबै कुरा पेटमा गएर बन्ने सुगर नै हो । हाम्रो बुझाई गलत छ। सु’गर हुनेले यो खान हुन्न त्यो खान हुन्न भनिन्छ । सुगर भनेको भात खान नहुने रोग भन्ने प्रचलन अझ बढी छ । आलु खान नहुने भनिन्छ। यो सबै गलत हो । र’गतमा सुगरको मात्रा बढी देखिनु भनेको हामीले त खाना खायौं खाएको खानेकुरा पेटमा गएर सुगर बन्यो, त्यो कुरा इन्धनको रुपमा हाम्रो शरीरले प्रयोग गरेन भन्ने हो । तर, यसको अर्थ खाएको खाने कुरा पेटमा गयो चिनी बन्यो अनि खेर गयो । त्यो शरीरका अंगहरूले खान पाएन अनि अ’गंहरू भोकै रह्यो । हामीले खाएको खानेकुरा पेटमा जान्छ गएपछि पाचन भइसकेपछि चिनी बन्छ र पेटमा इन्सुलीन भन्ने हार्मोन उत्पादन हुन्छ। यसलाई पेन्क्रियाज भन्ने अंगले उत्पादन गर्छ। यो पेटको तलको भागमा हुन्छ ।
उत्पाद’न भएको इन्सुलीनले हामीले खाएर खानाबाट बनेको चिनी सबै अगंमा प्रवेश गराउने काम गर्छ । जब हाम्रो शरीरमा इन्सुलीनको मात्रा कमी हुन्छ खाएको चिज जुन चिनी बन्छ तर त्यो शरीरका अंगहरुमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । यही अवस्था हो सुगर भनेको । सुगर भनेको शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भएको होइन, शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कमी भएको हो । सुगर भनेको गुलियो चिज खाएर लाग्यो भन्ने गर्छौ चिनी धेरै भएर लागेको रो’ग भन्छौ तर यो गलत हो । सुगर भएको मानिसले गुलिया खान हुँदैन भन्ने होइन । एक चम्चा चिनी खादैमा केही फरक पर्दैन । जे खाए पनि पेटमा गएर बन्ने चिनी नै हो । चाहे गुलीयो चिज खानुहोस चाहे गुलियो नभएको खानेकुरा खानुस पेटमा गएर बन्ने चिनी नै हो । भात र आलु खान हुन्न भनिन्छ यो गुलियो भएर त होइन । यसमा कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ । सुगर भएको बेला कार्वोहाइड्रेट भएको खाने कुरा नखाने होइन कम खाने तर धेरै पटक खाने गर्नुपर्छ ।
सु’गरमा के खाने कसो खाने भनेर सोच्न जरुरी छैन । हामीले बजारमा हेर्छौ सुगर फ्री बिस्कुट, सुगर फ्री केक, सुगर फ्री सेलरोटी भन्छौ, सुगर फ्री चक्लेट भन्छौ यो सबै नचाहिने कुरा हो । हामीले गुलियो मात्रै सुगर भन्न भएन गुलीयो भनेको प्रत्यक्ष सुगर हो तर अरु कुरा अप्रत्यक्ष सुगर हो । त्यही भएर सुगर भएको बेलामा के खाने भन्ने प्रश्न होइनकी कति खाने भन्ने प्रश्न हो । सुगर भएको मान्छेको लागि अलग्गै प्रकारको खाने कुरा जरूरी पर्देन । यस्तो चलन संसारमा छैन हाम्रो देशमा मात्रै किन यस्तो भनिएको छ । यो सुगर फ्री, त्यो सुगर फ्री भनेर नचाहिने हल्ला गरिएको छ । यो, त्यो खानेभन्दा पनि कति खाने भन्ने सोच्नुपर्छ । थोरै खाने धेरै चोटी खाने तर के खाने भनेर सोच्ने होइन। रक्सी चुरोट खान भएन यो सबैलाई थाहा छ । बोसो चिल्लो खान भएन । चिनीबाट बनेका चिजहरु धेरै सकभर खान भएन । अरू जे खाए पनि हुन्छ । धेरै खाने होइन तर धेरैपटक खानुपर्छ ।
सुगर किन हुन्छ ? सुगरको प्रमुख कारण जीवनशैली नै हो । हाम्रो खानपिन ठीक छैन । मान्छेहरू अल्छी भएका छन् । तरकारी लिन जान पनि गाडी र मोटरसाइकलको प्रयोग गर्छन । मोटोपन धेरै छ । खाना समयमा नखाने र एकै पटकमा धेरै खाना खाने गरिन्छ । खाना साथै सुत्ने बानी छ। व्यायाम गर्ने चलन छैन । तनावपूर्ण जीवन शैली छ । यो बाहेक बंशाणुगत कारणले पनि सुगर हुन्छ । लापरबाही तरिकाले बिभिन्न किसिमका औषधि प्रयोग गर्दा पनि सुगर हुन्छ । पेटको रो’गी, क’लेजोको रो’गी, पित्तको रो’गी र पेन्क्रियाजको रो’गी भएको मानिसलाई हुन्छ। र’क्सी धेरै पिउनेलाई सुगरको खतरा हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कारण जीवन शैली नै हो । खाना धेरै खाने तर व्यायाम नगर्ने गर्दा सुगरको खतरा बढी हुन्छ । सुगरका लक्षणहरू, सुगर भएको लक्षण देखिन्छ भन्ने छैन । सुगरको मुख्य लक्षण भनेको मुख सुक्ने पिसाब बढी लाग्ने हुन्छ । पानी बढी प्यास लाग्ने, शरीरको तौल घट्दै जाने, यौन इच्छा कम हुँदै जाने, यौ’न अगंहरू चिलाउँदै जाने हुन्छ । छालाहरु सुख्खा भएर जाने हुन्छ । आँखा धमिलो हुने हुन्छ । यी लक्षणहरू सुगर भएको आठ, दस वर्षपछि मात्रै देखिन्छ । यसको लक्षण तुरून्तै देखिन्छ भन्ने छैन। त्यसैले बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। अर्को कुरा सुगरको मात्रा मात्रै जाच्ने चलन छ। यसले मात्रै हुँदैन। यसको लागि कोलस्ट्रोल,किड्नीको परीक्षण गर्नुपर्छ । सुगरको लागि विशेष परीक्षणसमेत गर्नुपर्छ ।
उपचार, सुगरको मुख्य उपचार भनेको खानपिन नै हो । जबसम्म खाने तरिका मिलाइँदैन जति औषधि खाए पनि ठीक हुँदैन । चिकित्सकको निगरानीमा बिभिन्न खालका औषधिको प्रयोग त गर्न सकिन्छ तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण बिरामी आफू सचेत हुनुपर्छ । आहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ। शरीरको तौललाई सन्तुलन गर्नुपर्छ। दिनमा तीस मिनेटदेखि पैतालीस मिनेटसम्म हिड्नुपर्छ। अथवा कुनै किसिमको व्यायाम गर्नुपर्छ । आहार, व्यवहार र विचार नबदलि जतिसुकै औषधि र सुई खोपे पनि ठीक हुँदैन । लापरबाही गरे के हुन्छ ? यसले बिरामीलाई तुरुन्तै दुःख दिँदैन । यसले बिस्तारै मार्छ । यसलाई म ‘साइलेन्ट किलर’ भन्न रूचाउँछु। यसले भविष्यमा आँखा नदेख्ने बनाउनसक्छ। कि’ड्नी फेल हुनसक्छ। हृ’दयघात हुनसक्छ। प्यारालाइसिस हुने खतरा हुन्छ । कतिपए अवस्थामा खुट्टासमेत काट्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था एकै दिनमा पुग्ने होइन। यसका लागि बीसौ वर्ष लाग्छ । त्यसैले यसलाई लापरबाही गर्न हुँदैन । हिजो सुगर ५ सय थियो आज ३ सय छ कन्ट्रोल भयो भनिन्छ यो गलत हो । सु’गर जति भए पनि त्यसले बिगार्ने उत्ती नै हो ।
सुगर आचरण सुधार्ने मौका पनि हो, सुगर हुनासाथ आत्तिनु पर्ने हुँदैन । यसले जिउन सिकाउँछ। मानिसलाई अनुशासित बनाउँछ। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो भने मानिसको आयु दस–पन्ध्र वर्ष बढ्छ । सुगर भएपछि म खत्तम भए केही गर्न सक्दिनँ भनेर सोच्न हुँदैन । रो’ग नभएको मान्छेले केही पनि परीक्षण गर्दैन । तर सुगर भएको मान्छेले बेलाबखत शरीरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुन्छ । जसले गर्दा उसलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ र रो’गको चाडो उपचार हुन्छ। सुगरको कन्ट्रोल गर्ने औषधिले र चिकित्सकले होइन यसको कन्ट्रोल बिरामी आफैंले गर्ने हो । जबसम्म बिरामीले चाहँदैन सुगर कन्ट्रोल हुँदैन । जतिपटक चिकित्सक कँहा धाए पनि जति औषधी खाए पनि यो कन्ट्रोल हुँदैन। यदी बिरामी स्वयम् सचेत भएन भने ।
Prevछा’लाको रुखोपन तथा दा’गधब्बा हटाउन प्रयोग गर्नुहो’स् गु’लाब जल